Cargo Bike Musika (Nhamba Yemavhiri: Maviri Mavhiri, Matatu Mavhiri, uye Makumbo Maviri; Kushanda: Courier & Parcel Service Provider, Huru Retail Mutengesi, Yekufambisa Yega, Tsvina, Maseru masevhisi, uye Vamwe; Kufambisa: Electric Cargo Bike uye Diesel / Peturu Cargo Bike; uye Kubata: Kushandisa Kwemunhu uye Zvekutengesa / Zvekushandisa) - Global Viwanda Kuongorora, Saizi, Kugovana, Kukura, Maitiro, uye Forecast, 2020-2030
Kusimbiswa pakuderedza Traffic Kuunganidzwa uye Kuchengetedza Nharaunda kuti uwedzere Kutengesa
Kubva pane yekuona zvinhu, maviri-mavhiri kana mabhasikoro akasara ari ekutanga sarudzo yevatengi kupota pasirese. Zvakare, nekuda kwezvakatipoteredza, logistical, uzivi, uye hupfumi zvinhu, kudiwa kwemabhasikoro kwakaramba kwakangogara kwakakwirira kupfuura iko kwemotokari kunyanya mumatunhu ari kusimukira akadai seAsia Pacific, Latin America, uye Middle East & Africa. Mabhasikoro emotokari akawana mukurumbira wakakura mumakore achangopfuura, nekuda kwemushandisi wepamusoro wequotient, kushomeka kwekudiwa kwekugadzirisa, uye kuzvimba kunosangana nemigwagwa, kunyanya munzvimbo dzemadhorobha pasi rese.
Sezvo migwagwa yemuguta iri kuramba ichivharika nekumhanyisa, mabhasikoro emitoro abuda seimwe yenzira dzinotakurika uye dzakapfava dzekufambisa dzemakambani anotakura zvinhu nekuda kweizvozvo, kudiwa kwemabhasikoro emitoro kwave kuchingofamba munzira yekumusoro mumakore apfuura- chiitiko chingangoenderera pamusoro penguva yekufungidzira. Mukumira kweanoramba achienderera matanho anotorwa ekuchengetedza nharaunda, vatambi vanoshanda mumusika wazvino wemabhasikoro emitoro vari kuwedzera kutarisa kugadzirwa kwemagetsi emabhasikoro emagetsi. Vatambi vanoverengeka vanoshanda mumusika wemabhasikoro enhumbi anotarisirwa kuwedzera chigadzirwa chavo mumakore anotevera.
Kumashure kwezvinhu izvi pamwe nekukwira kwakakura kwehuwandu hwekutengeswa kwevatengesi mumaguta ematunhu akasiyana siyana, musika wepasirose wemabhasikoro unotarisirwa kudarika US $ 6.3 Bn mucherechedzo pakupera kwa2030.
Kudiwa kubva Yakagadziriswa Nharaunda paKukwira; Cargo Bikes Inowana Mukurumbira seEco-inoshamwaridzika Logistic Solution
Mumakore mashoma apfuura, hurumende nemamwe masangano anotonga, kunyanya mumatunhu akasimukira, vari kuramba vachiedza kuyedza kugadzirisa matambudziko mazhinji ane chekuita nekufambisa uye kukanganisa kwazvakaita nharaunda. Hurumende dzinoverengeka pamwe nemasangano asiri ehurumende kutenderera pasirese vanofarira kuwedzera kugamuchirwa kwemabhasikoro emitoro senge eco-inoshamwaridzika yemaguta zvinhu zvekufambisa imwe nzira. MuEurope, Guta Changer Cargo Bike Project inonyanya kukoshesa kusimudzira mashandisirwo emabhasikoro emitoro seyoutano, yekuchengetedza nzvimbo, eco-hushamwari, uye inodhura-nzira yekufambisa mune zvese zviri zviviri, zvakavanzika pamwe nekushambadzira kushandiswa.
Zvishoma zvezvirongwa zvakafanana muEurope pamwe nemamwe matunhu epasi anotarisirwa kuve nehunhu hwakanaka pamusika wepasirese wemabhasikoro epakati munguva yekufungidzira. Kuwedzera kwakakura kwenhamba yemapurojekiti akadaro kunotarisirwa kuunza ruzivo rwakakosha pakati pevabatanidzi vanoshanda munzvimbo dzekutengesa, dzeveruzhinji, uye dzakazvimirira. Kuwedzera kwekushandiswa kwemabhasikoro emitoro kune yakazvimiririra & yekutengesa zvinhu uye semi kumira mira kunoratidza kuri pachena kuti mabhasikoro emota ari kukurumidza kuwana mukurumbira mukuru pasirese.
Zvakare, mumarudzi akaita seGerman, mu2019, kutengesa kwemabhasikoro emagetsi emagetsi kwakapfuura kuya kwemotokari dzemagetsi. Maguta mazhinji eEuropean, kusanganisira Amsterdam neCopenhagen vari kutungamira nzira maererano nekushandiswa kwemabhasikoro enhumbi senzira yekufambisa yakatsiga.
Vatambi veMusika Vanotarisa Kuwedzera Chigadzirwa Portfolio Kuti Uwane Kubatsira
Makambani akati wandei anoshanda muindasitiri yekutakura zvinhu, kusanganisira DHL, UPS, neAmazon vakaratidza chishuwo chekuyedza kugona kwemabhasikoro emitoro muNew York City, uye vatangisa chirongwa chekutyaira kudzikisa kuwandisa kwemotokari mumamwe matunhu eManhattan. Masangano ehurumende yemunharaunda akadai seThe New York City Dhipatimendi Rekufambisa ari kuwedzera kuisa pfungwa pakuongorora kuchengetedzeka uye kugona kwemabhasikoro emitoro. Vatambi veMusika vanoshanda mumusika wemabhasikoro wazvino vari kuwedzera kutarisa kuwedzera chigadzirwa chavo uye kuvhura mabhasikoro ekutakura zvinhu kusimbisa chinzvimbo chavo mumusika.
Semuenzaniso, muna Nyamavhuvhu 2020, Tern akazivisa kuvhurwa kweye nyowani yemagetsi bhasikoro inotakurirwa kuti ishandiswe munzvimbo dzemadhorobha. Saizvozvo, muna Chikunguru 2020, Raleigh akazivisa kuvhurwa kwenzvimbo nyowani yemagetsi emabhasikoro emagetsi.
Maguta Pasi Pose Anotungamira Zvakaderera-kabhoni Yekutakura Pakati peRinoenderera COVID-19 Denda
Kutanga kwe COVID-19 denda kunotarisirwa kuve nemhedzisiro yekukura kwepasirese bhasikoro rinotakura zvinhu mu2020. Maguta akati wandei pasirese akaisa pamberi nzira dzakaenzana uye dzakaderera-kabhoni nzira dzekufambisa, kusanganisira kuchovha bhasikoro uye kufamba kuenda chengetedza kuchengetedzwa kwevagari. Pamusoro pezvo, nekuda kwenhamba inowedzera yezviitiko kupoterera pasirese, mabhasikoro emitoro akabuda seimwe yenzira dzakachengeteka uye dzakanyanya kutakura yekupedzisa kutakura, kunongedzera-kune-poindi, uye kwekupedzisira-mamaira. Zvakare, sezvo mabhasikoro anotakura zvinhu achigona kucheneswa zviri nyore kana tichienzanisa nemota kana marori ekuendesa, kudiwa kwemabhasikoro emitoro pakati pechirwere che COVID-19 chiri kuramba chichiwedzera.
Musika wepasirese wemabhasikoro unotarisirwa kuwedzera paCAGR ye ~ 15% panguva yekuongorora. Iko kuwedzera kuri kutarisisa pakuderedza kuzara kwemigwagwa, kudzikisira kabhoni, uye mashandisirwo emota dzekufambisa dzakatsiga dzicharamba dziri chinhu chakakosha kutyaira musika webhaisikopo yemutakura panguva yekufungidzira. Zvakare, akati wandei ehurongwa hwehurumende, kunyanya mumatunhu akasimukira, anogona kuwedzera ruzivo nezve maricho emabhasikoro pakati pevane chekuita mubazi rezvekutakura nekuda kweizvozvo, kutengeswa kwemabhasikoro emitoro kucharamba kuchikura.
Cargo Bike Musika: Ongororo
Musika wepasirese wemabhasikoro unotarisirwa kuwedzera paCAGR ye ~ 15% panguva yekufungidzira, nekuda kwekuwedzera kwevatengi maitiro ekutenga pamhepo pasirese. Kukwira muhuwandu hwemotokari dzinotakura, senge mavans kana marori, kuri kuwedzera kuwedzera mukuzara kwemotokari. Semuenzaniso, zviverengero zvakaitwa neHurumende yeUK kuti maveni akaverengera 15% yetraffic yakazara muEngland mu2019. Kuunganidzwa kwemigwagwa kunokonzera tsaona dzemumugwagwa nekutambisa nguva nemafuta.
Urbanization iri kuwedzera kumatunhu akasiyana siyana pasirese. Muna Chivabvu 2018, United Nations yakataura mupepanhau kuti 55% yevagari vepasi rose vanogara mumadhorobha, ayo anotarisirwa kusvika 68% na2050. Kuwedzera uku kwekukwira kwemaguta kwawedzera huwandu hwemotokari mumigwagwa nemabasa ekuvaka, izvo zvakatungamira kuzara uye kuwanda kwemotokari.
Vatyairi veCargo Bike Musika
Kukwira mukuburitsa choutsi kunetsekana kukuru pasirese. Kuwedzera kwehuwandu hwenzendo dzekuendesa nhumbi kuri kuwedzera kuwedzera kuzvisi zvemweya. Semuenzaniso, iyo European Union inotaura kuti nzendo dzekuendesa dzinoverengera ingangoita 15% yenzendo dzese dzemumaguta munyika dzeEurope, izvo zvinoguma nekuwanda kwemafuta ekushandisa uye chisi.
Masangano ehurumende anoyamura njodzi anosanganisira Arlington Hofisi yeEmergency Management vari kushandisa mabhasikoro ekutakura zvinhu uko dzimwe mota dzekutakura dzisingakwanise kuchovha panguva yenjodzi. Zvakare, European Cyclists 'Federation inokurudzira kushandiswa kwemabhasikoro emitoro panguva yechimbichimbi kana njodzi dzinongoitika dzoga. Nekudaro, kuwedzera zvisiri-zvakajairwa kunyorera kuri kukurudzira kudiwa kwemabhasikoro emitoro pasi rose.
Hurumende pasi rese dziri kutanga zvirongwa zvekudzora zvakashata zvekusimudzira kukura kwemaguta uye huwandu hwemotokari pane zvakatipoteredza. Hurumende dziri kukurudzira vanhu kuti vatore mhinduro idzi senzira yekusiya marori echinyakare, nekuda kwezvakanaka zvinopihwa nemabhasikoro anotakura zvinhu sekuderedza kuzara kwemotokari uye pombi yemuswe wemuswe.
Zvinetso zveCargo Bike Musika
Iyo COVID-19 denda yakakonzera kuwanda kwemabhizimusi kupasi rose kupunzika, nekuda kwekumanikidzwa kumisikidzwa kwekugadzira nekugadzira zviitiko. Izvi zvave kutungamira hupfumi hwepasirese kuita chibvumirano kusvika padanho repasi rekukura. Mazhinji emabhizinesi mune ese maindasitiri anoenderana nekodhi uye ari chikamu chemakambani makuru ekupa mumusika. Kuvhiringidzika mukutengesa kwekutengesa kunoreva kumisa kwekufambisa uye masevhisi ekutakura uye kudzikisira kudiwa kwemotokari pasirese zvingangokonzera indasitiri yemotokari yepasirese kubvumirana muQ1 neQ2 ye2020.
Kugadziriswa kwetekinoroji emabhasikoro emitoro kunokanganisa mashandiro avo, nekudaro zvichitadzisa kugamuchirwa kwavo kwemitoro inorema uye yakareba-kureba. Magetsi emagetsi emabhasikoro ane madiki mabhatiri, ayo anogumira iwo marange uye anoda kugara achijaja. Izvo zvisina kuvandudzwa zvivakwa zvemagetsi emagetsi kuchaja zvinoita emagetsi mabhasikoro emagetsi asingashandisike pakufamba-kure-kure. Izvi zvinogadzira kudiwa kwetekinoroji yepamusoro yebhatiri, iyo inogona kuwedzera huwandu hwemabhasikoro emitoro.
Cargo Bike Musika Chikamu
Musika wepasirese wemabhasikoro wakakamurwa zvichienderana nenhamba yemavhiri, kunyorera, kufambisa, umiridzi, nenharaunda
Zvichienderana nenhamba yemavhiri, iwo matatu mavhiri chikamu akatonga epasirese cargo bhasiketi musika. Matatu matatu ane mavhiri emabhasikoro anopa akasimba kukwira, zvichienzaniswa neiyo inopihwa nemavhiri maviri emabhasikoro. Pamusoro pezvo, chiyero chinopihwa nemavhiri matatu chinogonesa vadiki kutyaira bhasikoro rezvitoro zvakare. Ichiteverwa kumatatu mavhiri, iwo maviri mavhiri chikamu chinofungidzirwawo kubata chakakura mugove, maererano nemari, munguva yekufungidzira.
Kubva pane kunyorera, iyo courier & chikamu chikamu chebasa chakabata chikamu chakakura chepamusika wepasirose bhasikoro. Kuwedzera mukusarudza eCommerce kunotenga chinhu chakakosha kusimudzira chikamu uye chikamu chikamu chebasa. Vatengi vanogona kutenga kwavo pamhepo kuendeswa kuburikidza nemabhasikoro enhumbu kana kubvarura mabhasikoro emitoro; nokudaro, akati wandei online zvitoro zvekutengesa uye makambani ari kutarisa kuwedzera kwebhizimusi kumatunhu akasiyana siyana kusimudzira kwavo kwepasirese bhizinesi kusvika.
Cargo Bike Musika: Dunhu Kuongorora
Yakavakirwa padunhu, musika wepasirese bhasikoro wetiwo wakakamurwa kuenda kuNorth America, Asia Pacific, Europe, Latin America, uye Middle East ne Africa.
2.North America neEurope zvinofungidzirwa kuve misika ine mari zvikuru munguva yekufungidzira. Hurumende yeUK yakaisa mari munzira dzakawanda dzekutsigira kugoverwa kwemabhasikoro emitoro. Zvakare, kudiwa kwemabhasikoro anotakura zvinhu kuri kuwedzera muFrance, Spain, neNetherlands, izvo zvinogona kukurudzira musika. Simuka mukuziva nezve mabhasikoro emitakuri kuNorth America inofungidzirwa kuti iwedzere musika wemabhasikoro enharaunda mudunhu iri.
Cargo Bike Musika: Makwikwi Landscape
Vatambi vakakosha vanoshanda mumusika wepasirese wemitoro yebhasikoro vanosanganisira
Mabheki & Mabhasikoro
Cezeta, Douze Fekitori SAS
Energica Motor Kambani, Govecs Boka
Rad Simba Mabhasikoro LLC
Yadea Boka Kubata Ltd.
Yuba Electric Cargo Mabhasikoro
Vatambi vakakosha vanoshanda padanho repasirese vari kuwedzera tsoka yavo nekubatana nekubatana nevatambi vanoverengeka muindastiri. MunaGunyana 2019, Mahindra & Mahindra vakavhura chirimwa chitsva muWashington DC, US, kusimbisa kuvepo kwayo muUS, uye kambani yakaisa mari inosvika US $ 1 Bn yekuwedzera nzvimbo yayo yekugadzira muUS Niu International inogadzira mari zhinji kubva mukutengesa. ye e-scooter kuendesa kunze kweinternet kana zvakananga kune vamwe vatengi online. Iyo kambani inotora omni-chiteshi yekutengesa modhi, inosanganisa iyo isingaite uye online chiteshi, kutengesa e-scooter.
Post nguva: Mar-12-2021
Kufambisa Pane Bhasikoro, Chiedza Bhuruu Midhudhudhu, Rutivi Mira Puck, 22.5 Mavhiri Evhiri, E Bhasikoro Kukanya, Yakanakisa Lithium Midhudhudhu Battery Chaja,